C.Ronaldo oo Cadeyay sii joogista Man utd | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Anelka oo shegay in uu ka Tageynin Chelsesa Iyo Arsenal oo doonaysa Drogba
Gerrd oo ku Guuleystay Bilada Ciyartoyga Xaga Aqlaqda →
C.Ronaldo oo Cadeyay sii joogista Man utd
Nairobi::CRISTIANO RONALDO ayaa hoosta ka xariiqay kadib markii uu Arsenal ka dhaliyay laba goal oo cajaa’ib leh asagoo u sheegay taageerayaasha Manchester United: “Waan joogayaa Old Trafford.”
Xiddiga reer Portugal, ee 24 jirka ah, ayaa u hogaamiyay naadiga United finalka koobka Champions League kadib markii uu ku dhaliyay laba goal layaab leh garoonka Emirates.
Iyo wararka sheegaya in ciyaaryahanka lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqa dhankaa iyo kooxda Real Madrid, ayaa Ronaldo laf ahaantiisa waxa uu xaqiijiyay inuu sii joogayo nadigiisa United.
Waxa uu yiri: “Su’aashan waxaa la I waydiiyay waqtiyo badan. Aniga waxaan aad ugu faraxsanahay Manchester waliba halkan inaan joogo ayaan doonayaa. Aniga waxaan aad xooga u saarayaa inaan ku guulaysano Champions League-ga.”
Ronaldo ayaa ugu dambeyntii waxa uu bilaabay inuu soo bandhigo qaabka uu ku yahay ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan — waliba haddii uu u hogaamiyo United guul taariikhi ah final-ka Rome waxa uu sii xagsan doonaa booskiisa ah Laacibka Aduunka. Kadib 3-1 oo ay kaga guulaysteen Arsenal iskudarka 4-1 celcelis labadii ciyaarood ee semi finalka Champions League-ga ay ugu shareecatay Man United dhankaa iyo Rome, intaasi ayuu ku daray: “Waxaanu u dheelnay si aad u wanaagsan oo aynu kaga hor imaan lahayn naadi ciyaara kubad wanaagsan.
“Aad ayeey u adag tahay in lagu dhaliyo halkan aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay anigu waxaan dhaliyay laba goal naadiguna iminka finalka ayuu joogaa.”
Boss Alex Ferguson ayaa ka ciyaarsiiyay Ronaldo dhanka weerarka halkii uu ka dheeli lahaa dhanka garabka midig ama bidix.
Fergie ayaa la gudoonsiiyay abaal marin qaali ah taasoo ay ka mid ahayd qaab ciyaareedka wanaagsan ee uu soo bandhigay Ronaldo xagaagan.
Waxa uu dhaliyay goalka labaad ee United asagoo ka laaday kubad xor ah 41-yard meel u jirta goosha, kadibna waxa uu sii raaciyay goalkii quusinta ayagoo lasoo cararay oo weerar celin deg deg ah ku qaaday goosha Arsenal.
Balse ciyaartii midas ka danbeysay ayaa waxaa Badal lagu sameyay Ronaldo wxaana muuqatay in uu ka xumaa badalkaas lagu sameyay waxaa ay Kamrada soo qabaneysay isagoo madaxa ruxaya una muuqda mid wal walsan lamana oga waxa ay ka badali doontii HEshiiskaas arintan
ANiso Maaacalin Ali
Comments Off on C.Ronaldo oo Cadeyay sii joogista Man utd
Posted by Mohamed Tollman on May 13, 2009 in Uncategorized